Ny androaniko | Lasalasa fisainana | 2
[Lasalasa fisainana ] 18 Martsa, 2016 21:52
Lanaky ny nofy ratsy ihany ikalamako
Raketiko ato aloha ity fa mety izay no hanosika ahy hanoratra hitantara azy atsy ho atsy (izany hoe hiverenako soratana ity lahatsoratra ity amin'izay).
Efa ho herinandro mahery manko izao no sembanin'ny nofy ratsy foana ny torimasoko. Teo alohaloha izy dia saika nitovy foana ny fitrangany, saingy afak'omaly alina niova kely ary tena tsy tiako mihitsy. Dia mba hafa koa, somary maivamaivana alina (tsy alina moa izany fa efa maraina e, satria aho taitra tampoka sady nangovitra moa ny famantaranandro fanaraina koa naneno, namoha an'ingahirainy handeha hiasa).
Efa nanam-pikasana hanoratra ilay nofy afak'omaly ihany aho satria kamo hitantara amin'ny olona sao lazainy efa marary saina. Saingy tena tsisy aingam-panahy mihitsy fa toa modaka be fotsiny ato. Kanjo nivenjivenjy kely teto amin'ny aterineto aho io dia nahita famporisihana hoe aborahy fa aza kobonina ny nofy ratsinao, soraty raha tsy tianao tantaraina amin'ny olona, amboary ho angano kely, ezaho ho tsara fiafara fa hanampy anao betsaka izany.
Dia tonga ato ihany aho aloha izany manoratra ity. Asa raha ho tafaverina miaraka amin'ny aingam-panahy hiangaly azy na dia hionona amin'ity
[Lasalasa fisainana ] 10 Septambra, 2015 21:25
Mpampianatra taranja frantsay anay teny amin'ny sekoly ambaratonga faharoa no nitantara ity taminay. Asa naninona fa tsy afaka tato anaty lohako izy ity efa ho herinandro izao
Fa fony fahavelony, hono, ingahy Formidable dia nanafatrafatra mihitsy ireo havany hoe raha maty aho dia aza mba apetraka eo an-doha fasako ny anarako fa tsy tiako mihitsy.
Satria manko, hono, dia nohadrohadroin'ny olona loatra sy nihomehezan'ny olona foana izy tamin'io anarany io noho ilay anarana tsy dia mahazatra.
Nony tonga tokoa, hono, ny andro nahalasanany, dia toy izao no soratra napetraky ny havany teo amin'lay vato mariky ny fasany.
"Ato no mandry fehizay, olona iray mamy hoditra tamin'ny fiaraha-monina. Nahafoy ny androny tamin'ny fanaovan-tsoa. Nanome izay kely nananany nanampiana ny hafa. Tsy mba nitady valiny teo amin'izay nataony tamin'ny hafa. Vady, ray, zanaka, zoky, zandry, namana, mpiara-miasa tsy foinay mandrakizay."
Dia isaky ny misy mpandalo, hono, eo amin'ny fasany ka mijanona mamaky ilay soratra, dia misento tokana, miteny hoe : "c'est Formidable !"
Angano angano, arira arira,
[Lasalasa fisainana ] 23 Martsa, 2015 04:19
Ny havesa-danjan'ny Misaotra
Toa tsy mety ho lany daty mihitsy ity resaka manao soa ity izany an. Lasa teo indray manko ny tafasiry. Ny votoatin-dresaka dia iray foana : manaova soa raha mbola afaka manao izany. Mivaly hatrany ny soa atao. Tsy miandrandra valiny anefa rehefa manao soa. Ary tsy ny olona hanaovana izany no voatery hamaly anao.
Dia tiako hotantaraina kely eto ity zavatra niainako vao haingana ity.
Tamin’ny faramparan’ny taona 2014 iny dia nisy dia iray nalehako. Efa mahafinaritra moa mikisaka ankehitriny fa maro ny saran-dalana mora. Dia nitsiry teo koa ny hevitra hoe efa handeha ihany ka ahoana raha mitsoriaka mamangy namana iray. Nojerena dia afaka mahita tapakilan-damasinina haingam-pandeha mora ihany koa. Nisy fanahiana ihany hoe raha sanatria ka tsy tratra dia vola very fotsiny, satria hampiasa fitaterana isan-karazany vao ho tonga eny amin’ny fiarandalamby. Raha ny kajy tsotsotra dia tokony ho tratra, na ampiana ireo fotoana lany amin’ny fitohanan’ny fiara eny an-dalambe sy ny fiandrasana ny fitateram-bahoaka sasany aza dia azo atao hoe malalaka ihany. Dia tapaka ihany ny hevitra hoe aleo aloha atao mba tsy hanenenana. Raha tena tsy tratra dia tsy anjara izany ny hifankahita. Raha lasa dia arahaba soa arahaba tsara.
Kanjo tokoa dia tena tsy laitra ilay fitohanana teny an-dàlana hany ka tena 10 mn alohan’ny hiaingan’ny fiarandalamby aho vao nitontona tany. Ilay gara rahateo mbola tsy haiko ka tsisy fotoana nandinihana hoe aiza no mankaiza fa nahita soratra manondro masinina haingam-pandeha dia nihazakazaka tsisy toa izany nidina ilay tohatra. Efa hampaneno kiririoka ny “sefo de gara”. Avy dia niakatra tsy nanontany intsony fa faly erý hoe lasa ihany. Kanjo sady manidy varavarana ingahy sefo no miteny hoe “marihina fa tsy manan-kery amin’ity fiarandalamby ity ny tapakila mora vidy” …
Loooza, notaritina indray ny valizy ndeha hivoaka kinanjo tsy nisokatra intsony ny varavarana. Nikoropaka nitady an’ilay sefo. Soa fa iny izy handeha hanamarina ny hidim-baravana koa. Ampidino aho hoy aho taminy fa diso azafady. Ho aiza ianao, hoy izy. Nolazaiko ny alehako dia hoy izy hoe ka mankany ity kah. Eny hoy aho, mankany ity saingy tsy tapakila mandeha amin’ity no atý an-tanako, izaho tsy manam-bola hividianana tapakila feno matoa aho naka ity. Mandehana aloha hoy izy mipetraka etsy fa jereko ny momba izany avy eo fa tsy afaka midina intsony ianao na ahoana na ahoana.
Nipetraka, nipotrapotraka ny hatsembohana, nihararetra nefa faly ihany hoe lasa – tsss. Lasa teo ny kajy tao an-doha hoe mety mbola ampy ve ny vola sisa aty amiko sa hiantso an’i sefo Hery hamahana ny karatra ilay fividianana zavatra amin’ny aterineto.
Afaka kelikely io hitako ingahy sefo mifamaly amin’ny tovolahy afrikana. Tsy haiko zay nifamaliana fa ny reko dia ilay tovolahy miteny hoe “tsy manafokafoka anao aho”… dia nanohy nifamaly teo, dia nilamina avy teo, dia hitako namoaka vola ilay tovolahy. Dia nandray ny tapakilany dia nipetraka teo amin’ny seza teo alohako. Dia niandry ny anjarako aho. Dia niandry. Asa impiry izy no nandalo teo amiko, fanahy iniako jerena fa sao ataony dia mody fanina aho. Tsy miteny tsy mivolana izy fa manohy ny làlany, dia nanomboka naka toky aho no sady nanomboka latsa-dranomaso hoe “ndryyy mba mitsinjo ahy ve izy izany e ?”
Na izany na tsy izany, mba lalina koa aloha ilay gara misy fiarandalamby roa samy haingam-pandeha dia miaraka miainga e ! Sa natao fanahy iniana fa tsy maintsy misy foana ny diso toa ahy ?
Afaka adiny telo tonga soa aman-tsara tany amin’izay naleha. Navelako nidina daholo ny mpandeha satria teo amin’ny kalesa loha-masinina sady misy ny tranokelindrizareo mpiandraikitra no nisy ahy. Nony tafidina daholo ny olona dia nanao mbay làlana ilay mpiara-miasa aminy aho satria somary nibahana teo an-dalantsara izy. Etsy ny fivoahana hoy izy fa tsy atý. Azafady hoy aho fa misy zavatra tiako lazaina ilay mpiara-miasa aminao fotsiny, dia nomeny làlana aho. Naheno ahy ingahy sefo dia nijery. Efa nomaniko moa ny holazaiko. Nataoko teo amin’ny foko ny tanako, ny feoko mangovitra (be hetsimpo tsssssss) : “misaotra tompoko” hoy aho sady somary niondrika kely aho. “Tsy misy fisaorana madama”, hoy izy. Nitanàka ilay namany nijery ahy… “andrayyyyyy, hoy izy, tsara beeeee”.. “marina e”, hoy ihany izy sady nampakariny ny ankihiben-tànany.
Nandritra ny adiny telo dia zay no nameno ny lohako : tsy ny olona ataonao soa no hamaly izany aminao. Ary tsy mitady valiny aminao koa ny olona manao soa anao. Ka mahaiza mankasitraka na kely na be ny soa atao aminao. Mahaiza misaotra.
[Lasalasa fisainana ] 28 Febroary, 2015 08:47
Tora-drano avy any ambony...
Indrisy ry Iarivo, Iarivo niandohana, mamy k'efa nilokana.... safo-drano ianao ity ! Sanatria ve ka heniheny ianao ka hiverina ho heniheny ?
Dia ho aiza ireto vahoaka ? Inona izao no harapaka fa ny kely an-tànana nafoy, ny trano nianjera sy dobo-drano, ny asa vao maika tsy hisy, sns. Inona no hatao rehefa hisintona ny rano ? mbola hiady amin'ny fivelomana, ny aretina ho manginy fotsiny, ny Fanjakana tsy azo ianteherana.
Efa niainanay ny rano niakatra teny amin'ny tanàna ambany 30 taona lasa izay fa tsy mbola nisy ny tahaka ity indray mitoraka ity...
[sary tokana ihany (nindramina tao amin'i Madagascar Sondage) fa vaky toy ireo fefiloha ny fo mijery ireo sary marobe.]